Dhammaan wixii ku saabsan iPhone ee ku jira iPhone News | News IPhone (Bogga 20)
Waligood ilaaliye shaashad si fudud uma codsan karo
Caalin waa badeecad si gaar ah loogu talagalay in lagu fududeeyo hawsha dhigida shaashadda shaashadda qalabkayaga si dhakhso leh oo fudud.
U samee boostada sanduuqa macruufka
IOS 7 Mail waxay na siisaa fursado badan. Waxaan ku tusineynaa sida loogu hagaajiyo sanduuqa sanduuqa faylalka gaarka ah.
Ciladbixinta iMessage on macruufka 7 (Tutorial)
Waxaan u soo bandhigeynaa casharkaan yar si aan u xallino dhibaatooyinka iMessage ee qalabkayaga oo leh iOS 7 oo iyaga siiyay qalad markay dirayaan ama helayaan.
Sida loo damiyo Raadi My iPhone Furitaanka Lock
Ammaanka cusub ee raadiya My iPhone wuxuu ka hortagaa soo celinta aaladda iyada oo aan la aqoonsan milkiilaha hore. Waxaan sharaxeynaa tillaabooyinka la qaadayo si loo xaliyo
Sida loo tirtiro farriimaha ku jira iOS 7
IOS 7-ka cusubi wuxuu badalay qaab dhaqameedkii aan ku ogaan jirnay tirtirka fariimaha. Astaanta tafatirka waxaa lagu badalay tilmaamista suuxdinta.
IPhone-ka ayaa wali ah badeecad caalami ah marka Samsung ay sidaas joojiso
Samsung waxay go’aansatay inay xaddido macaamiisheeda xorriyadda ay u leedahay inay beddesho qaaradaha, kana horjoogsato inay aaladooda ku adeegsadaan goobo shisheeye.
Ka tirtir hufnaanta iyo saamaynta isku-darka si loo hagaajiyo waxqabadka
Apple waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka saarto macruufka iyo saameynta Parallax ee iOS 7, hagaajinta waxqabadka qalabka iyo yareynta isticmaalka batteriga.
Sida loo joojiyo gelitaanka xarunta ogaysiinta iyo xarunta xakamaynta shaashadda qufulka
Sida loo joojiyo gelitaanka xarunta ogeysiiska ee iOS 7 iyo xarunta xakamaynta shaashadda qufulka.
Casharro: Sida Loo Dhoofiyo Muuqaallo Codsi Qunyar Socod ah oo loogu talagalay iPhone 5s
Waxaan ku sharaxeynaa sida loo dhoofiyo fiidiyowyada asalka ah ee dhaqdhaqaaqa gaabiska ah ee iPhone 5s
Sida loo beddelo xarfaha iOS 7
Waxaan kuu sheegeynaa sida wax looga beddelo farta iOS 7 si aad uga dhigato mid la akhriyi karo
Sida loo abuuro fayl aan magac lahayn iyo iyadoo aan loo baahnayn in JAILBILA
Waxaan ognahay in abuurista faylal barnaamijyo gaar ah gudaha aan ka dhigi karno inaysan na weydiinin inaan magac u dhigno daruuri.
Tayaynta isticmaalka batteriga ee iOS 7
Waxaan ku siineynaa talooyin ku saabsan sida loo hagaajiyo isticmaalka batteriga ee iOS 7
Sida loo qariyo codsiyada, loona abuuro faylal kuwa kale dhexdooda iOS 7
Cayayaanka ayaa lagu daadiyaa internetka taas oo noo ogolaaneysa inaan qarino codsiyada iyo faylalka, marka lagu daro noo ogolaanshaha inaan ku abuurno fayl kuwa kale dhexdooda.
Dejinta Raadi iPad-kayga IOS 7
Baro nala baro sida loo qaabeeyo Raadi My iPad utility-ka cusub ee iOS 7.
Bandhiggan moodada ah waxaa lagu duubay kamaradda iPhone 5s
Burberry waxay ina tusaysaa bandhigeeda London, oo si buuxda loogu duubay kamaradda iPhone 5s
Sida loo abuuro waraaqo-duug ah si loogu raaxeysto saameynta isku midka ah ee iOS 7
Trick si aad u abuurto sawir-qaadayaal leh saameyn isku mid ah oo loogu talagalay macruufka 7 ee iPhone, iPad ama iPod Touch
Kiisaskii ugu horreeyay ee rasmi ah ee iPhone 5c ayaa bilaaba inay yimaadaan
Sawirro kiisaska rasmiga ah ee ugu horreeya Apple iPhone 5c.
Microsoft waxay dul martaa xayeysiiskeedii ugu dambeeyay ee 'anti-Apple'
Ogeysiisyadii ugu dambeeyay ee ay Microsoft soo saartay ee ka dhanka ah Apple waxaa helaya kumanaan dhaliil waana laga noqday
Diyaar ma u tahay inaad cusboonaysiiso macruufka 7? Wax walboo aad ubaahantahay inaad ogaato kahor.
Dhammaan astaamaha iOS 7 ee aad ugu raaxeysan karto qalabkaaga, sida loo cusbooneysiiyo, dib loogu soo celiyo nuqulladaada iyo codsiyadaada ...
Kuwani waa kiisaska qalabka baaritaanka faraha uusan ka shaqeyn doonin iPhone 5s
Waxaan ku sharaxeynaa kiisaska uu ku shaqeynayo sawirka baaraha iPhone 5s
AT&T waxay xaqiijineysaa qiimaha iPhone 5s, iPhone 5c iyo iPhone 4s
Shirkadda taleefannada Mareykanka ee AT&T ayaa xaqiijineysa qiimaha iPhone 5s
Fikradayda: IPhone 5C macno badan ayuu u sameynayaa Apple
IPhone 5C ayaa suurtogal ah inay tahay bilowgii ugu fiicnaa ee Apple dhaqaale ahaan sanadihii la soo dhaafay.
IOS 7 Master Master hadda waa la heli karaa
IOS 7 Master Master hadda waxaa laga heli karaa bulshada soo-saaraha
iSpy Helicopter, helikobtar leh kamarad aan ku xakameyno iPhone-ka
iSpy Helicopter waa diyaarad helicopter ah oo ka hawlgasha iphone isla markaana ku jirta kamarad VGA ah si ay u duubto video ama sawiro uga qaadato.
Sida looga nadiifiyo boodhka iyo wasakhda kamaradda iPhone 5-kaaga
Halkan waxaan kaaga tagnay cashar fudud oo ku saabsan sida wasakhda looga nadiifiyo kamaradda iPhone 5-kaaga si fudud oo dhakhso leh.
Diyaarso qalabkaaga si aad u cusboonaysiiso macruufka 7 (I): Cusboonaysi ama dib u soo celi?
Maalmo yar gudahood waxaan haysan doonaa nooca cusub ee IOS ee la heli karo. Sida loo diyaariyo qalabkaaga si aad ugu cusbooneysiiso iOS 7? Waan kuu sharraxeynaa.
Apple waxay ka jawaabtaa eedeymaha ku saabsan tacadiyada shaqaalaha ee soo saarista iphone 5C
Shirkadda Cupertino ayaa ka jawaabtay eedeymaha ku saabsan xadgudubyada shaqada ee la sheegay in lagu sameeyay hannaanka wax soo saarka ee iPhone 5C.
Casharbarka: Sida loo demiyo Amber iyo digniinta xaaladaha degdegga ah ee iphone
Sida loo demiyo Amber iyo digniinta xaaladaha degdegga ah ee iPhone
Cashar barasho: Ku hel 1GB dheeraad ah Dropbox oo leh barnaamijka sanduuqa
Sida loo helo 1GB kaydinta DropBox dheeraad ah markaad isticmaalayso barnaamijka sanduuqa
Buugga tilmaanta ee iPhone 5C ayaa xaday
Waxaa jira waxyaabo yar oo aanan horay uga ogayn nooca cusub ee Apple soo bandhigi doonto Talaadadan, in kasta oo sawirada ay sii muuqanayaan kuwa na siinaya dhammaan faahfaahinta.
iPhone 4, oo ah kan ugu jecel Mareykanka dhexdiisa kuwa iibsada taleefannadooda casriga ah
IPhone 4 waa nooca loogu jecelyahay Mareykanka dhexdiisa kuwa iibsada taleefanadooda casriga ah
Beddel, kala saar oo ku milmaan Aqoonsiga Apple suurtagal?
Aqoonsiga Apple wuxuu sababa dhibaatooyin soo noqnoqda dadka isticmaala. Aqoonsiga Apple miyaa la beddeli karaa, la milmi karaa ama la kala saari karaa? Wax walba waan kuu sharxeynaa.
Ku Bilaabashada iBooks (IV): Qalabka Daraasadda
Qaybta afraad ee buuggan "Isticmaalka iBooks" waxaan ku arki doonnaa aaladaha daraasadda sida: hoosta ka xariiq, tilmaam, qaamuus, qoraallo ...
Ku Bilaabida Buugaagta (III): Buugaagta Akhriska
Maqaalkan saddexaad ee taxanaha ah "Bilaabidda iBooks", waxaan ka hadli doonnaa sida loogu bilaabo akhriska iBooks: sida loo rogo bogagga, looga tago calaamadeynta, iyo waxyaabo kale oo badan.
Tani waa waxa aan ka filayo iPhone 5C
Saadaalinta ku saabsan sida ay u ekaan karto Apple iPhone 5C
Sida loo balaadhiyo shabakadaada wireless-ka iyadoo lagu mahadinayo AirPort Express
Aasaasida AirPort Express si loo kordhiyo calaamadeena WiFi waa mid aad u fudud. Waan sharaxeynaa sida.
Bilaabida iBooks (II): Bakhaarka iyo Buugga ku dhigida Ipadka
Munaasabaddan, waxaan ka hadli doonaa sida loo iibsado buug adoo adeegsanaya Bakhaarka iBooks ama sida loo galiyo EPUB ama PDF iPad-ka iyada oo loo marayo iBooks.
Ma jeceshahay inaad awood u yeelato inaad doorato midabka iPhone-kaaga soo socda?
Moto X, Motorola's flagship cusub, waa tan ugu horumarsan ee qaabeynta dibedda. Miyaynu arki doonnaa wax la mid ah iPhone mustaqbalka?
Bilaabida iBooks (I): Marka hore Eeg App
Akhriska buugaagta waa hawl aad u wanaagsan oo lagu xoojinayo indhaha, maskaxda, iyo aragtida ... iPad-ka waxaan ku qaban karnaa mahadsanid codsiga: iBooks
Sida loo aqoonsado noocaaga iPhone iyo iPad
Waxaan ku tusineynaa miisas aad si fudud ugu aqoonsan karto tusaalaha iPad-ka ama iPhone-ka ee aad haysato adoo fiirinaya koodhka gadaashiisa
Saidoka, oo ah goob aad u qurux badan oo iPhone ah
Saidoka hadda waxaan ku hilmaami karnaa dogogyadaas dhibta badan ee noo oggolaanaya inaan si dhib yar u isticmaalno aaladdayada inta aan lacag ku shubanayno, hadda way fududahay.
Khibradda aqriste ee Isbaanishka Apple Store oo leh barnaamijka beddelka xeedho aan asal ahayn
Khibraddii uu soo maray akhristeheenna, Alejandro, ee ku jirtay Bakhaarka Apple ee Murcia ee ku saabsan barnaamijka beddelaadda ee xeedho aan asal ahaan lahayn ee Apple.
HiRise, waxay u egtahay meesha ugu fiican ee iPhone 5 ilaa taariikhda
Dib-u-eegista HiRise, ku xir iPhone 5 iyo iPad mini oo ka socda Twelve South
Sida loogu daawado filimada Google Play qalabkaaga iOS
Daawashada filimada Google Play-ka ee iPad-ka iyo iPhone-ka waa mid aad u fudud, waxaan si faahfaahsan u sharraxeynaa sida loo sameeyo.
Top 5 shaqooyinka qarsoodiga ah ee badhanka jirka ee iOS
Kuwa idinka mid ah ee ku cusub macruufka, kuwan waa shanta tabaha ee ay tahay inaad ogaato oo noloshaada uga fududeynaya qalabkaaga iOS.
Kiisaska PureGear iPhone ee Ciyaaraha Retro
Waxaan ku falanqeyneynaa qaar ka mid ah kiisaska xiisaha leh ee PureGear ee seddex moodal oo leh ciyaaro caadi ah oo dhabarka ah, Cajiib, Groovy iyo Undecided for fun.
Apple waxay ku kordhisay bedelka xeedhooyinka aan la fasaxin dhulal kale
Apple waxay fidisay barnaamijkeeda si ay ugu bedesho xeedho tayo leh shaki leh aduunka intiisa kale si ay awood ugu yeelato inay ku hesho mid kale qiimo dhimis
Tutorial: Sida looga saaro iPhone-kaaga 'Habka Soo-kabashada' adoon dib u soo celin
Waxaan kuu sharaxeynaa sida looga saaro iPhone ama iPad qaabka soo kabashada adigoon dib u soo celin
Fiidiyowgii ugu horreeyay ee kiiska jaalaha ah ee iPhone 5C
Fiidiyowgii ugu horreeyay ee kiiska nooca iPhone-ka cusub ee huruudda ah ayaa ifaya iyo isbarbar dhigga aaladaha kale ee shirkadda.
Cashar: Sida loo ogaado haddii qof ku helayo 'Raadi Saaxiibbaday' mahadnaqa IOS 7 iyo dejinta arrimaha gaarka ah
Sawirro cusub oo casaanka ah iPhone 5C
Sawirada cusub ee loo malaynayo iyo '' raqiiska '' iPhone 5C ee midabka casaanka ah ayaa la sifeeyey, tan ugu fiiqan ilaa hadda. Iphone-kani ma ka raqiisan yahay sida la sheegay?
Macno u leh macruufka: Sida loo beddelo astaamaha bilaa Jailbreak
Iconical wuxuu kuu ogolaanayaa inaad bedesho astaamaha codsiyada macruufka. Waxaan falanqeyneynaa hawlgalkeeda iyo natiijada ugu dambeysa.
Apple waxay bilawday barnaamij lagu badalayo xeedho kadib
Shirkadda Apple ayaa bilowday barnaamij lagu beddelayo xeedhooyinka suuqyada gadaal ka dib markii laba shiineys ah ay koronto qabsatay iyagoo amraya iPhone 5.
Blutrol, sida loogu isticmaalo cayaarahaaga?
Tilmaame si aad u awood u yeelatid inaad isticmaasho kantaroolaha PS3 si aad ugu ciyaarto iPhone, iPad ama iPod Touch mahadnaq u ah jebinta Blutrol iyo hagaajinta
PhotoFast i-FlashDrive HD - USB Flash Drive-ka loogu talagalay iPhone
i-FlashDrive oo ka socda PhotoFast: waa usha USB-ga ee iPhone-ka.
Cashar Cashar: Sidee Looga Tiriyaa Heesaha Nuqullada Ah iTunes
Cashar barasho: Unlockit, abuur Apn astaantaada internetka adigoon tirtirin kaligeed
Nidaamkan fudud waxaad ku habeyn kartaa Apn ee hawl wadeenkaaga kumbuyuutarka ah.
Sida loo beddelo emaylka la xiriira aqoonsigaaga Apple
Bedelashada akoonka emailka ee aasaasiga ah ee laxiriira Aqoonsigaaga Apple ayaa soo gali kara marar badan.
Ciyaar nooc kasta oo faylal ah oo leh VLC ee macruufka
VLC ee macruufka hadda waa la heli karaa. Waxaan kuu sharraxeynaa hawlgalkeeda iyo gabagabada ka dib markaan si fiican u tijaabinnay.
Casharro: Sida loo galiyo fiidiyowyada arjiga VLC
Casharkaan waxaad ku baran doontaa sida loo galiyo faylashaada arjiga cusub ee VLC
Cashar barasho: sida looga kaydiyo khariidadaha Khariidadaha Google qad la'aan
Casharbarka si loo kaydiyo khariidadaha Google khariidadaha khadka tooska ah ee iPhone, iPad ama iPod Touch sidaas awgeedna maahan inay ku xirnaadaan internetka.
Khibradaha iyo talooyinka seddex bilood ka dib adoo adeegsanaya Diir
Waxaan kuu sheegayaa khibradeyda seddex bilood ka dib anigoo isticmaalaya Pebble maalin kasta oo aan awood u leeyahay inaan ka faaloodo xoogiisa iyo daciifnimadiisa.
Shoulderpod, oo ah qalab kale si looga faa'iideysto kamaradda iPhone-ka
Shoulderpod waa qalab loogu talagalay iphone iyo taleefannada kale ee casriga ah ee noo oggolaanaya inaan horumarinno raaxada marka aan sawir qaadno.
Cashar barasho: Sida loogu abuuro fariimaha otomaatiga ah taleefankaaga iPhone-ka
Casharkaan waxaad ku baran doontaa sida loo abuuro farriimo otomaatig ah otomaatig ah marka aadan qaadan karin wicitaanka.
Tigidhada Renfe horeyba waxay ula jaanqaadi jireen Passbook
Shirkadda gaadiidka tareenka, Renfe, horeyba waxay ula jaanqaadi kartaa barnaamijka Apple Passbook markay isku darayaan tigidh aan ku iibsanno.
"Tutorial" Sida loo dhaqaajiyo isku xidhka macruufka 6 iyo 7 bilaa JAILBREAK
Casharradan waxaad ku baran doontaa inaad dhaqaajiso isku xidhka macruufka 6 iyo 7 ee hawlwadeennada aan la taageerin iyo iyadoon loo baahnayn JAILBREAK
Aaladda Apple shatiyada EarPods oo leh nidaamka baajinta dhawaaqa firfircoon
Patent-ka Apple ayaa muujinaya EarPods oo leh nidaam tirtirida buuqa firfircoon iyada oo ay ugu wacan tahay adeegsiga makarafoonnada falanqeeya dhawaaqa ka imanaya banaanka.
Apple iyo istiraatiijiyaddeeda suuqgeynta si loo kordhiyo iibka
Apple wuxuu falanqeeyaa istiraatiijiyaddiisa si loo kordhiyo iibka dukaamada jirka. Hindisayaal cusub oo deyrta ah iyo ciidan aalado soo socda.
Falanqaynta shan kiis si loo ilaaliyo iPhone-kaaga xeebta ama barkadda
Waxaan fulineynaa falanqaynta 5 kiis si aan ugu raaxeysto iPhone-kaaga xagaagan xeebta, barkadaha dabaasha ama ku xigta waxkasta oo isboorti tan iyo markii ay diidaan dharbaaxo
Abuur akoon US iTunes ah
Waxaan kuu sharaxeynaa sida aad ugu abuuri karto koontada iTunes-ka Mareykanka si aad uga faa'iideysato heerka sarrifka dollar -euro oo aad ugu raaxeysato codsiyada gaarka ah.
Toosh LED ah si kor loogu qaado sawirrada lagaa qaaday iPhone-kaaga
Sida loo isticmaalo adeegga "Raadi My iPhone"
Waxaan ku tusineynaa sida loo raadsado My iPhone, adeegga Apple oo kaa caawin kara inaad soo kabsato qalabkaaga.
Sida loo keydiyo batteriga ku jira iPhone-ka iyo iPad-ka adoo kaashanaya xarunta ogeysiiska
Tilmaamahan waxaad ka heli kartaa waddo aad ku keydiso xoogaa batteriga aaladdaada iOS-ga ah adigoo ka furaya xulashooyinka xarumaha ogeysiinta
Ninkii helay noocii iphone 4 ee baarka ayaa sheekadiisa sheegaya
Sida loo wadaago feylasha adoo adeegsanaya AirDrop macruufka 7
Waxaan ku tusineynaa sida ay u shaqeyso AirDrop, habka cusub ee lagula wadaago feylasha inta udhaxeysa qalabka iOS 7.
Falanqaynta aasaasiga ah ee iPhone Woody Dock Mountain iyo dhiirrigelinta
Falanqaynta saldhigga Woody Dock Mountain ee loogu talagalay iPhone-keena, oo lagu farsameeyay alwaax Isbaanish ah shirkadda Sowood oo si fiican u dhammeysatay.
Dib u eeg Helo TC: helikobtar aad ka maamuli karto iPhone-ka
Waxay maareeyaan inay hareer maraan nidaamka ogaanshaha qalabyada aan la fasaxin ee leh macruufka 7
Soo-saare ayaa maamusha inuu dhaafo cabbirka ogaanshaha qalabka siyaada ah ee macruufka ah ee ay iOS 7 u leedahay aaladaha la xiriira danabka.
Tirtir macluumaadka dhirta safari ee ku saabsan iOS
Tilmaamahan waxaad ku baran kartaa inaad ka tirtirto xogta hagista ee bareeyaha safari isla qalabkii iOS
Casharrada: soo celinta adigoon luminin JAILBREAK (SemiRestore)
Sida loo soo celiyo iPhone-ka iyada oo aan JAILBILAIL ama iOS la soo dejin adoo isticmaalaya qalabka SemiRestore ee Windows iyo Mac
Dhabarka iPhone 5S ayaa daadanaya
Waxay maareeyaan inay ka helaan lambarka sirta ah ee Wi-Fi HotSpot qalab macruufka ah
Koox khubaro amni ah oo ka socda Jaamacadda Erlangen ee Jarmalka ayaa ku guulaystay inay qiyaasaan furayaasha uu macruufku si otomaatig ah u soo saaro
Lumu, mitir kale oo iftiin u ah iPhone-ka
Lumu waa mitir iftiin u ah iPhone-ka kaas oo noo ogolaanaya inaan helno qiyamka saxda ah ee ISO, furitaanka iyo waqtiga soo-gaadhista iyadoo kuxiran iftiinka deegaanka.
iOSFonts.com, websaydh kulmiya farta qoraalka loo adeegsado macruufka
iOS Fonts waa bog internet ah oo ururiya dhammaan noocyada ku jira iOS muddo dhawr sano ah si loogu isticmaalo qaabeynta websaydhka ama barnaamijyada.
Ka dhig NCSettings Toggles inay u ekaadaan macruufka 7 Toggles
Tutorial si aad u hesho qaar ka mid ah Toggles sida lagu arkay Xarunta Xakamaynta ee iOS 7 laakiin gudaha xarunta ogeysiinta ee iOS 6.
macruufka 7 wuxuu ogaadaa fiilooyinka hillaaca aan Apple ka shahaadeyn
IOS 7 wuxuu ogaadaa fiilooyinka dhinac saddexaad ah ee Apple aysan shahaado ka helin wuxuuna fariin ku muujinayaa shaashadda iPhone.
Dib u Eegid Video: Tani waa sida aan u daawado smartwatch ee aan daawado
Tutorial: sida loo rakibo iOS 7 beta
Adabtarada Dolry waxay u keentaa AirPlay afhayeenkaaga 30-pin
Adabtarada 'Dolry HiFi Stone' waxay u beddeleysaa af-hayeenkii hore ee 30-pin-ka ahaa AirPlay casri ah, DLNA iyo AllShare oo ku hadla is-waafajin ah.
Dib u eegis: Kiisaska Fu-Design ee iPhone 5
Belkin wuxuu soo bandhigayaa kiis batari ah iPhone 5
Belkin wuxuu bilaabay Kiiska Battery Grip Power for iPhone 5 kaas oo u muuqda inuu haysto batari gudaha ah oo ah 2000 mAh.
Waxay helayaan wado ay ku dhaafaan nambarka qufulka xadaynta
Jilicsanaan cusub ayaa laga helay macruufka oo kuu oggolaanaya inaad dhaafto lambarka amniga ee ka ilaaliya menu-ka xaddidaadaha.
Waxay maareeyaan inay jabsadaan qalab macruufka wata xeedho wax laga beddelay
Saddex cilmi baare oo ka tirsan machadka teknolojiyadda Georgia ayaa helay waddo ay ku jabsadaan iPhone-ka wax ka yar hal daqiiqo.
Ogast Smart Lock wuxuu furaa albaabada gurigaaga
Waxaan ku tijaabinay Quirky Converge super dock dhowr iPhone ama iPhone iyo iPad
Waxaan ku tijaabinay Quirky Converge super dock dhowr iPhone ama iPhone + iPad
ILEX RAT, soo celi aaladdaada adigoon waayin Jailbreak (Cydia)
iLEX RAT waa codsi Cydia ah oo noo oggolaanaya inaan si fudud u soo celino qalabkeenna iyada oo aan luminin Jailbreak.
SemiRestore wuu shaqeeyaa. Soo Celinta qalabkaaga adigoon luminin JAILBREAK
Waxaan tijaabinay SemiRestore, oo ah codsi kuu ogolaanaya inaad soo celiso adoo dayactiraya JAILBREAK, waxaana xaqiijinay inay si fiican u shaqeyso
Waxaan tijaabinay SemiRestore wayna shaqaysaa. Soo Celinta qalabkaaga adigoon luminin JAILBREAK
Waxaan tijaabinay SemiRestore, oo ah barnaamijka kuu ogolaanaya inaad soo celiso adigoon waayin Jailbreak, waana shaqeysaa. Waxaan muujineynaa nidaamka
ProScope Micro Mobile microscope xirfadle ah ee iPhone-kaaga hadda la heli karo
Shirkadda Bodelin Technoligies ayaa soo saartay mikroskoobkeeda 'ProScope Micro Mobile microscope' si loogu adeegsado iphone iyo ipad oo loogu talagalay saynisyahannada iyo cilmi-baarayaasha.
Mophie wuxuu soo bandhigayaa Kiis Battery cusub oo ah 2100mAh oo loogu talagalay iPhone 5
Mophie wuxuu diyaarinayaa nooca Casiirka Cunnada ee loo yaqaan 'Juice Pack Plus Plus' ee loo yaqaan 'iPhone 5' kaas oo leh awood baatari ah 2100mAh si uu u bixiyo 10 saacadood oo dheeri ah oo hadal ah.
Sida Loogu Soo Degsado Muunadaha Buugaagta iBooks
iBooks-ka iyo keydkiisa buugga Apple waxay kuu oggolaanayaan inaad soo dejiso muunado bilaash ah oo buugaagta ah ka hor intaadan iibsan.
Kudar boosas inta udhaxeysa astaamaha guga bilaa xabsi
Casharbarka si aad u gelisid meelo bannaan oo u dhexeeya astaamaha boodhadhka iPhone-ka ee leh iOS 6 adigoon haysan JAILBREAK.
Sida loo rakibo naqshado kala duwan oo saacado ah (watchfaces) on the Pebble smartwatch
Waxaan sharaxeynaa sida loo rakibo nashqadaha saacadaha cusub ee loo yaqaan 'Pebble'. Geedi socodka waa mid aad u fudud oo lagu samayn karaa ka iPhone.
Ku hel emayllada 'GMail' iCloud-ka adigoo riixaya
GMail waxay laashay taageeradii sarrifka waanna luminay riixitaankii. Iyada oo ay "trick" waxaan ku soo kaban karno iyadoo la isticmaalayo koontadayada iCloud.
«Dhagax dixeed» dib u eegis smart: qiimihiisu waa sugitaan
Dib u eegis lagu falanqeynayo naqshadeynta, qeexitaannada, howlgalka iyo suurtagalnimada saacadda loo yaqaan 'Pebble watch', oo ka mid ah saacadaha ugu horreeya ee casriga ah ee iPhone
UniKey waxay soosaartay quful dijitaal ah oo kuu ogolaanaya inaad gurigaaga ka furto iPhone-kaaga
Earskinz, dabool caag ah oo loogu talagalay EarPods
Earskinz waa gacmo caag ah oo ku wareegsan EarPods si loo wanaajiyo raaxada, taranka basaska iyo hagaajinta go'doonka dibadda
Ku darso Wifi iyo Bluetooth qaabka diyaaradda
Habka diyaaraddu wuxuu joojiyaa isku xirnaanta fiilooyinka, laakiin waa suurtagal in la kiciyo Wi-Fi iyo Bluetooth.
Waxaan ku tartamaynaa 3 nuqul oo Pradium ah, buugga is dhexgalka ee Matxafka Prado
Pradium, buugga is-dhexgalka ee Matxafka Prado waa shaqo aad u wanaagsan oo rafcaan u noqon doonta kuwa jecel farshaxanka ee doonaya inay booqasho tamashle ah ku tagaan matxafka
Jawbone UP jijin ayaa horay ula midoobay codsiyada kale
Jawbone UP jijin isboorti ayaa durbaba la yimid xirmadiisa horumarinta si ay ugu adeegsan karto dalabyada dhinac saddexaad.
Inta ugu badan ka hel Google Now
Google Now ayaa hadda loo heli karaa IOS, waxaan ku siineynaa dhowr talooyin si aad uga faa'iideysato adeegga.
iTunes Ma Aqoonsado iPad-kayga (II): Sida Loogu Xaliyo Mac OS X
Haddii iTunes uusan aqoonsanayn qalabkaaga, dhammaantood ma lumaan. Waxaan ku sifeynaa tillaabooyinka la raacayo si loo isku dayo in aan loo soo celin aaladda.
iTunes ma aqoonsana iPad-kayga (I): sida loo hagaajiyo Windows-ka
Dhibaatada soo noqnoqda ee isticmaaleyaasha ayaa ah in iTunes aysan aqoonsanayn qalabkooda. Waxaan kuu sharaxeynaa tillaabooyinka la isku dayayo in lagu hagaajiyo Windows-ka.
Adiga dayactir IPad-gaaga (I): Badhanka guriga
Mar labaad barnaamijka iPad News waxaan kusoo bandhigeynaa wax cusub, qeyb cusub: Adiga iPad-ka dayactir. Markan waxaan ku tusaynaa badhanka guriga.
Runtastic wuxuu soo bandhigayaa kiis si loo dhigo iPhone-ka dusha sare iyo dareeraha dareeraha xawaaraha
Waxaan tijaabinay kiiska cusub ee Runtastic si aan ugu dhejino iPhone-ka mootada iyo dareemaheeda xawaaraha-cadence-ka oo leh Smart Bluetooth.
Calan digniinta caadiga ah ku dhig Calendar IOS
Kalandarka ayaa na siinaya ikhtiyaarka aan ku abuuri karno ogeysiis dhacdooyin ah oo aan u qaabeynay.
Waxaannu ku tijaabinay Kiisaska Dheeraadka ah ee Birta Dheer ee 'iPhone 5'
The More Armor Metal Hybrid Case for iPhone 5 waxay u taagan tahay ilaalinta taleefanka Apple iyada oo ay ugu wacan tahay naqshadeeda isku dhafan aluminium iyo polycarbonate.
OtterBox wuxuu bilaabayaa kiis si loo ilaaliyo iPhone 4 / 4S batteriga gudaha ugu badnaan
Otterbox waxay soo bandhigtay kiis, marka lagu daro ilaalinta sida kuwa ka tirsan kuwa difaaca, ay ku jirto batteriga gudaha iyo codsi.
Waxaan tijaabinay Samsung DA-E750 Audio Dock, codbaahiye leh qalab kordhiyo faakiyuum
Samsung DA-E750 Dock waxay bixisaa dhawaq tayo leh oo ku jira shey is haysta oo bixiya xiriiro badan, oo ay ku jiraan 30 biinanka iyo AirPlay
Durex waxay soosaareysaa gariiriye uu xukumo iPhone-ka
Durex Fundawear waa ururinta dharka hoosta oo leh gariiriyeyaal yaryar oo laga xakameyn karo iPhone-ka si loo kiciyo meelaha xasaasiga ah.
Sida loo saxo qoraalka loo qoro Siri on your iPhone (Tutorial)
Waxaan u soo bandhigeynaa casharkaan si aan u saxno qoraalka aan weydiinayno Siri haddii uusan si fiican ugu dhawaaqin ama uusan kaaliyaha aqoonsaneyn.
Sida loogu dhaqaajiyo ChatHeads iyo istiikarada gacanta Facebook 6.0
Tutorial si aad u dhaqaajiso shaqooyinka ChatHeads iyo istiikarada Facebook 6.0 ee iPhone iyo iPad.
Runalyzer Blue garaaca garaaca wadnaha ee iPhone
Dib-u-eegista Runalyzer Blue garaaca garaaca wadnaha ee iPhone.
Badhanka guriga: Haddii uusan shaqeyn, waxaan leenahay Assistive Touch (II)
Marka badhanka gurigu uu istaago shaqadiisa waxaan haysannaa laba arrimood oo suurtagal ah oo la sameeyo: kalifay ama si fudud u isticmaal Assistive Touch si aad u xakameyso badhanka.
Badhanka guriga: Sideen u qiyaasi karnaa haddii uusan shaqeyn? (I)
Si loo hagaajiyo saxnaanta badhanka gurigeenna ee aaladdayada Apple oo leh badhanka, kaliya waa inaan raacnaa dhowr tallaabo oo fudud.
Mophie Juice Pack Helium. Guri iyo batari aad iPhone 5
Dib u eegista Mophie Juice Pack Helium, kiis batari ah oo loogu talagalay iPhone-keena 5 kaas oo aan niyad jabin doonin
iHelicopters waxay soo bandhigeysaa gawaari RC ah oo ay maamusho iPhone oo aad adigu iskaa u dhisi karto
Calaamadaha 'iHelicopters' waxay suuqyada ka dhigtaan gaari ama gaari yar oo aan ka dhisi karno iskana xakameyn karno iPhone-ka, iPad ama iPod Touch.
Cunsuriyada iyo fikradaha qaldan ee ku saabsan macruufka
Markaad ka hadlayso macruufka iyo Android, waxa ugu fudud ayaa ah inaad kudhacdo ereyada oo aad ku dhaleeceyso barxadda ka soo horjeedda fikradaha beenta ah.
Sida loo maqlo isla codka saxda ah kanaalka dhagaha
Sida loo maqlo isla codka saxda ah ee ka soo baxaya sameecadaha iPhone-ka
SBSettings iyo NCSettings: ku dar dariiqyo gaabin ah howlaha aasaasiga ah (Cydia)
Waxaan falanqeyneynaa laba ikhtiyaar si loogu daro tuuryo shaqooyinka muhiimka ah ee iOS, sida dhaqaajinta WiFi, Bluetooth ...
Iswaafaji Safari dhammaan qalabkaaga adoo adeegsanaya iCloud
iCloud wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isku xirto calaamadaha Safari, liiska aqrinta, iyo tabs ka furan dhamaan qalabkaaga
Ka tirtirka lambarrada xisaabiyaha iPhone waa fududahay laakiin ma aha mid aad u macquul ah
Sida loo tirtiro lambarrada kalkuleytarku ku dhex jiro iPhone-ka shaqsi ahaan adoo sameynaya tilmaam.
iBye: Cydia keyd ah, codsiyo iyo waxyaabo kaloo badan (Cydia)
iBye waa codsi Cydia ah oo kuu oggolaanaya inaad abuurto nuqulo nuqul ah oo qalabkaaga ah, oo ay ku jiraan codsiyada ka socda Cydia, App Store iyo kuwo kale
Dhagax dixeedu wuxuu xaliyaa fashilka saacadaha casriga ah
Ceeryaan: kiis ilaaliya naqshadda asalka ah ee iPhone 5
Kiis ilaalinaya naqshaddii asalka ahayd ee iPhone 5
IWatch-aan-Apple ahayn ayaa horey loogu iibiyay Shiinaha
Kalluumeysiga Shiinaha ee saacadda Apple ee aan weli la soo bandhigin wuxuu leeyahay isweeyntiisa Shiinaha ee loo yaqaan 'K1 iWatch' oo leh shaashad 1,8 inji ah.
U habee codad kala duwan koontooyinka emaylkaaga
Boostada ayaa ku siineysa suurtagalnimada inaad ku xirto dhawaaq ka duwan koonto kasta oo aad qaabeysay, iyo sidoo kale habka laguula socodsiinayo emayllada cusub
Waxaan tijaabinay Griffin PowerJolt Micro
Griffin wuxuu oggol yahay ka sokow iPhone-ka inaad sidoo kale ku dallaci karto iPad-ka gaarigaaga
Ku rakib XBMC-gaaga iPhone-ka (II): ku xir kumbuyuutarkaaga
Ciyaartooyga 'XBMC multimedia player' ee aan ka heli karno Cydia wuxuu noo oggolaanayaa inaan ku ciyaarno wax kasta oo aan ka haysanno kombuyuutarkayaga
Apple wuxuu bilaabayaa xaqiijin cusub oo laba-talaabo ah oo loogu talagalay Apple ID iyo iCloud
Apple ayaa maanta soo saartay hab xaqiijin oo cusub oo loogu talagalay ID-keena Apple iyo koontada iCloud oo ka kooban ...
iPhone 5 iyo Samsung Galaxy S4 fool ka fool
IPhone 5 iyo Galaxy S4 ayaa waji ka waji u mahad celinaya moodooyinka 3D ee noo ogolaanaya inaan si qoto dheer u aragno kala duwanaanshahooda
Ku rakib XBMC-gaaga iPad-ka (I): ku xir disk disk network
Thanks to ciyaaryahanka XBMC (Cydia) waxaad ku ciyaari kartaa wax kasta oo aad ku kaydisay wadista wadaagga adag ee shabakadaada.
Ku rakib XBMC on your iPhone (I): ku xir disk shabakad
XBMC waa ciyaariyahan laga heli karo Cydia kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku ciyaarto qaab kasta oo fiidiyoow ah oo ku kaydsan disk network.
IPhone 5 ma gadaal ayuu ka sii daayaa? 5S way joojin kartaa tan
Casharbarka si looga soo wareejiyo sawirrada iPad-ka kombuyuutarkayaga (I)
Kala soo wareejinta sawirada ipadka kombiyuutarka ma aheyn howl fudud oo dhanka boostada ah, maanta waxaan keenay codsi la yiraahdo: Image Transfer.
Ku xir iPad-ka Mac-gaaga sida haddii ay tahay shabakad wadaag wada wadayaal adag (Cydia)
Sida loogu xiro iPad-ka Mac-gaaga adoo adeegsanaya Finder-ka sidii ay u noqon lahayd shabakad wadaagga wadista adag.
Ka jooji marinka Siri iyo Passbook shaashadda qufulka
Tutorial si loo joojiyo isticmaalka Siri iyo Passbook shaashadda qufulka markaan haysanno lambar ammaan ah oo ku saabsan iPhone.
SOSCharger, xeedho degdeg ah oo loogu talagalay aaladaha mobilada
SOSCharger waa xeedho deg-deg ah oo loogu talagalay aaladaha mobilada ee ku jira batteriga 1500 mAh gudaha ah oo lagu buuxin karo crank ama USB.
Sida looga fogaado in farriimaha laguugu soo diro iMessage dadka aanan ku laheyn xiriiradayada
Casharro si loo yareeyo isticmaalka iMessage ee iPhone, iPad iyo iPod Touch oo kaliya dadka aad ku hayso jadwalkaaga si looga fogaado farriimaha shisheeyaha.
Paper Vs iPad, marka aysan jirin wax codsi ah oo wax walba ah (Humor)
Waxay bilaabeen olole xayeysiin ah oo la yiraahdo Paper vs iPad, kaasoo u qaadaya qaab kaftan ah oo mararka qaar iPad-ka uusan waxba naga badbaadin karin.
Sida loo maareeyo kaydinta iTunes
Waxaan muujineynaa sida nuqulada nuqul ee iTunes ay ku sameyso macluumaadka ku saabsan qalabkayaga shaqada.
Saacadda loo yaqaan 'Pebble watch' waa wax aan macquul aheyn in la dayactiro
Saacadda jibbaaruhu waa wax aan suurtagal ahayn in la dayactiro, taas oo ka hortageysa adeegsadaha inuu beddelo batariga oo uu iibsado mid cusub marka uusan ku bixinaynin is-maamul
Ku dar xadhig iPhone 5 qalabkan
Netsuke waa qalab loogu talagalay iPhone 5 kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku darto xadhig badbaado qaybta hoose ee terminalka si looga hortago dhicitaan shil ah.
Sida looga soo kabsado qoraallada ku jira codsiga Mail ee lagu daray macruufka
Siyaabaha dib loogu soo ceshano waxyaabaha qabyada ah ee ku saabsan codsiga Mail ee ku jira macruufka oo naga caawinaya inaan u dirno emayllada iPhone, iPad ama iPod Touch
Waxaan tijaabinay Spigen Neo Hybrid EX Slim Metal bumper ee iPhone 5
Spigen Neo Hybrid EX Slim Metal waa bamb aad u weyn oo loogu talagalay iPhone 5 kaas oo la yimaada ilaaliye hore iyo mid kale oo dhabarka ah.
Sida loo adeegsado qoraalka qabyada ah ee loo diro boostada loogu talagalay IOS
Adeegsiga qoraalka qabyada ah ee Boostada waa mid aad u fudud oo waxtar badan ayey yeelan kartaa marka aad ka tagto emaylka nuskiis.
Qaniinyada My Apple, degel websaydh ah wuxuu isu keenaa kan ugu fiican Kickstarter ee iPhone iyo iPad
Bite My Apple waa degel kulmiya mashaariicda Kickstarter ee dadka isticmaala iPhone ama iPad ay aad u jeclaayeen.
Laser xardhanaa dhabarka aad iPhone 5
GLAS.t Slim, shaashad ilaaliye u ah iPhone 5 oo aad si dhib yar u ogaan doontid
Glas.t Slim waa ilaaliyaha shaashadda ee iPhone 5 oo ay soo saartay shirkadda Spigen, dhumucdiisuna waa 0,26 milimitir oo keliya, taas oo ka dhigaysa mid aad u qiimo badan.
Thermodo, heerkulbeeg yar oo loogu isticmaalo iPhone
Thermodo waa qalab siyaado ah oo laga iibsan karo Kickstarter taasna waxay kuu ogolaaneysaa inaad si toos ah uga cabirto heerkulka daafaha iphone-ka.
Buddy: smartwatch awood u leh inuu muujiyo tilmaamaha GPS
Beddel mashiinka raadinta ee Siri u adeegsado asal ahaan
Tallaabooyinka lagu beddelayo mashiinka raadinta asalka ah ee uu adeegsaday Siri, kaaliyaha codka macruufka. Waxaad dooran kartaa Google, Bing ama Yahoo.
Abuur maktabado badan oo leh iTunes 11
Abuuritaanka dhowr maktabadood oo iTunes ah ayaa suurtagal ah waxayna noqon kartaa mid aad ugu habboon in laga helo waxyaabo kala duwan mid kasta oo ka mid ah.
Sida loo demiyo iibsashada gudaha-app-ka ee iOS
Tababar deg deg ah si loo joojiyo iibsashada barnaamijka, oo si fiican loogu yaqaan iibsashada gudaha ee aaladda macruufka ah.
Sida loo maareeyo keydinta qalabkaaga
Ogaanshaha waxa kujira keydinta qalabkaaga waa talaabada ugu horeysa ee aad sifiican ugu maamuli karto
Waze, hagaha bilaashka ah ee GPS, ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 3.6
Waze for iPhone iyo iPad ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 3.6 si loogu daro shaqooyin cusub, loo hagaajiyo waxqabadka, loona hagaajiyo cilladaha.
Isku dubarid qalab badan oo isku iTunes ah
iTunes waxay bixisaa suurtagalnimada in la iswaafajiyo aalado dhowr ah lana ixtiraamo codsiyada, filimada, muusiga ... mid kasta oo ka mid ah.
Apple waxay ka shaqeyn doontaa bixinta USB 3.0 fiilada hillaaca
Apple waxay xiiseyn kartaa inay horumariso isku xirka fiilooyinkeeda hillaaca ee aaladaha iOS-ka iyaga oo siinaya heerka USB 3.0 ee xawaaraha badan.
Abuur saxiix leh sawirro ku jira Boostada loogu talagalay IOS
Abuuritaanka saxeexyada sawirada ee barnaamijka Mail ee loogu talagalay macruufka ayaa suurtagal ku ah dhowr talaabo oo fudud.
Wax badan ka hel barnaamijka boostada ee ku jira iPad-ka
Khiyaamo yar oo kaa caawinaya inaad wax badan ka hesho Boostada, barnaamijka iimaylka macruufka ah.
Isticmaalka FaceTime si aad u sameyso wicitaano cod waa sahlan tahay xeeladdan
Trick u ogolaanaya sameynta wicitaanada codka adoo adeegsanaya FaceTime ee iPhone, iPad ama iPod Touch, curyaaminta isticmaalka kamaradda hore ee qalabka.
Waxaan ku tijaabinay Runtastic Smart Combo heerka garaaca wadnaha oo leh Bluetooth 4.0
Waxaan tijaabinay suunka xabadka ee loo yaqaan 'Runtastic Smart Combo', oo la jaan qaadaya Bluetooth 4.0 iyo soo noqnoqodka 5,3Khz oo noo ogolaanaya inaan cabirno garaacistayada.
Sida loo iswaafajiyo WiFi (I): Codsiyada iyo Multimedia
Casharbarka si loo ogaado ikhtiyaarrada isdhaafsiga ee aan lahayn fiilooyinka, adoo adeegsanaya shabakadda WiFi ee gurigeenna. Gudbinta codsiyada iyo warbaahinta badan ayaa suurtagal ah fiilooyin la'aan.
Dib u eegista Otterbox Armor: kiiska ugu daran ee iPhone
Dib u eegista Otterbox Armor: kiiska ugu daran ee iPhone.
Waxaan ku tijaabinay Olloclip iPhone 5
Olloclip waa badeecad isugu jirta hal xabbo, saddex muraayadood oo kala duwan si aad uga faa’iideysato awooda kamaradda iPhone-ka.
Tilmaamaha dayactirka ee rasmiga ah ee iPhone 4 / 4S ayaa daadanaya
Buugta dayactirka ee rasmiga ah ee iPhone 4 iyo iPhone 4S waxaa lagu sifeeyay qadar ballaaran oo xog ah si loo xalliyo dhibaato kasta.
Apple waxay siin kartaa fiilooyinka danab ee aan la fasaxin
Apple ayaa laga yaabaa inay cusbooneysiiso jajabyada aqoonsiga ee lagu daray qalabka 'LIghtning plug-in' si ay uga dhigaan alaabada Shiinaha mid aan la isticmaali karin.
Cilad xagga amniga ah ayaa laga helay macruufka 6.1
Cillad khatar ah oo xagga amniga ah ayaa laga soo helay macruufka 6.1 ee iPhone-ka kaas oo kuu oggolaanaya inaad dhaafto furaha furaha oo aad u oggolaato helitaanka howlaha nidaamka.
Sida loo xakameeyo iPad-kaaga fog adigoo adeegsanaya Veency (Jailbreak)
Meel fog ka xakamee iPad-kaaga adoo u mahadcelinaya barnaamijka 'Veency' ee loo heli karo soo dejinta 'Cydia', gaar ahaan qalabka leh Jailbreak
Dib ugu bilaw hab aamin ah. Habka fiidiyoowga ah ee fiidiyowga ah ee amniga ah.
Ku bilaw Habka Ammaanku waa ikhtiyaar markii qalabkeena la xayiray ama u shaqeynayo si aanan u heli karin Cydia ama codsi kale
Otterbox Dib u eegista kiisaska: laba lakab oo ilaalin ah oo loogu talagalay iPhone
Otterbox Dib u eegista kiisaska: laba lakab oo ilaalin ah oo loogu talagalay iPhone.
Barashada isticmaalka Cydia ee iPad-ka (II): Codsiyada iyo Keydadka
Waxaan kuu sharraxeynaa sida loogu daro keydadka iyo sida loo helo loona rakibo codsiyada Cydia
Barashada isticmaalka Cydia ee iPad-ka (I): Ku xir akoon aaladdaada
Waxaan kuu sharaxeynaa sida loola xisaabtamo koontada aaladdaada si aad u soo dejiso codsiyada aad horay u soo iibsatay
Cashar ku siinta Jailbreak iOS 6 oo leh Evasi0n
Casharro si aad u JAILBREAK aad iPad, iPhone ama iPod Touch isticmaalaya Evasi0n, Jailbreak cusub ee macruufka 6. Sharaxaadda ee geedi socodka oo dhan tallaabo tallaabo.
Tutorial: JAILBREAK macruufka 6.1 la Evasi0n (Windows iyo Mac)
Waxaan ku tijaabinay kiiska Badbaadiyaha Griffin ee iPhone 5
Waxaan ku tijaabinay kiiska Griffin Survivor ee iPhone 5, oo ka duwan midka Otterbox Defender kaas oo ka ilaaliya dekedaha iyo kamaradaha garoonka silikoon.
La wadaag faylashaada aalado kala duwan isla waqtigaas adoo u maraya iUSB Port
Bowblade: qaanso si loogu tababarto toogashada iPhones-keena
Laba iyo toban South ayaa bilaabay SurfacePad, Smart Cover for iPhone
Shirkadda Twelve South ayaa soo saartay iPhone SurfacePad kiisa, qaabka Apple ee Smart Cover loogu talagalay iPad-ka, wuxuu ka samaysan yahay maqaar iyo saddex midab.
Sida loo maareeyo gurmad iCloud
Si fiican u maareeynta 5GB ee ay na siiso iCloud waa lagama maarmaan in la helo meel bannaan oo loogu talagalay keydinta qalabkeenna.
Dib u eegista kiiska Otterbox Defender: guud ahaan ilaalinta iPhone 5
Dib u eegista kiiska Otterbox Defender: guud ahaan ilaalinta iPhone 5.
Su’aalo iyo Jawaabo ku saabsan Jeel Jeelka
Hadda oo uu Jailbreak soo dhow yahay, waxaa jiri doona kuwa badan oo su'aalo badan iyo shaki ka qabnaan doona in la sameeyo iyo in kale.
Ku rakib MAME ROMS-ka Gridlee adiga oo aan JAILBILBILA
Waxaan ku sharaxeynaa casharkaan sida loo rakibo MAME ROM-yada arjiga laga helay App Store-ka loo yaqaan Gridlee barnaamijka iFunbox.
Bedelaadda shaashadda iPhone 5 saddex daqiiqo gudahood
Gridlee, oo ah emulator MAME ah oo ku dhex milmay App Store
Gridlee waa emulator MAME ah oo laga heli karo App Store kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku darto ROM-yada si aad ugu ciyaarto arcadada caadiga ah ee aad dooratay.
Sidan ayaa WeMo u shaqeysaa: fiilada aan ka xakameyn karno iPhone-ka
Dib u eegis: 3D daawade ee iPhone 4 iyo iPhone 5 ee Eassee3D
Dib u eegis: 3D daawade oo aan lahayn muraayado loogu talagalay iPhone 4 iyo iPhone 5 Eassee3D
iSpy Tank, qalab kale oo ay maamusho iPhone-ku oo lagu daro kamarad basaas ah
iSpy Tank waa gaari dhulka ah oo ay soo saartay iHelicopters oo lagu daro kamarad basaas ah oo duubta fiidiyowga isla markaana ku baahisa waqtiga dhabta ah Wi-Fi
Sida loo soo bandhigo codsiyada Kiosk-ka adiga oo aan haysan JAILBREAK
Casharro si loogu soo bandhigo codsiyada galka Kiosk-ka ee iOS 6, qalab kasta (iPhone, iPad, iPod Touch) iyo bilaa JAILBREAK.
Ra'yi uruurinta Todobaadka: sameecadahaaga aad door bido iPhone-kaaga?
Shirkadda Casetagram waxay soo bandhigaysaa daboollo cusub oo gaar ah oo loogu talagalay Maalinta Jacaylka
La wadaag dhacdooyinka iyo kalandarka on iOS
Iyadoo la adeegsanayo macruufka 'iOS' waa wax aad u fudud in lala wadaago dhacdooyinka shaqsiyeed iyo kalandarrada oo dhan dadka kale ama kooxaha. Waxaan kuu sharaxeynaa talaabo talaabo ah sida loo sameeyo.
Marka ciyaaraha AirPlay ay yihiin wax lagaa yaaban yahay, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo fiilada AV
Marka khibrada ku ciyaarida iPhone ama iPad adoo adeegsanaya AirPlay aysan macquul aheyn, waxaa fiican inaad u weecato fiilada AV-da si gabi ahaanba loo yareeyo dib u dhaca.
Dib u eegid: makarafoonka iRig oo ka socda MK-ga Multimedia
Midab cusub oo iPhone 5 ah oo wadnaha Android ah ayaa u muuqda: ZPhone 5
ZPhone 5 waa nuqul cusub oo Apple iPhone 5 ah laakiin leh Android 4.0 oo la rakibay oo wax laga badalay si ay ula ekaato mid iOS lagu rakibay.
Dib u eeg kiisaska Ozaki ee iPhone 5
Kiisaska Ozaki ee iPhone 5, dib u eegis kiisaska O!
CameraMator: isku xidhka saxda ah ee kamaradaha DSLR iyo iPhone
AnyGlove wuxuu galoofyada galoofyadaada jiilaalka u beddelaa galoofyo gacan-taabasho ah
Wax soo saarka AnyGlove ee dhibcaha ah, wuxuu u beddelaa mid kasta oo galoofyadaada ah waxqabad kasta oo la jaan qaadaya shaashada taabashada qalabkaaga.
Maanta Steve Jobs ayaa soo saaray iPhone-ka lix sano ka hor
10-ka Janawari, 2013 ayaa laga joogaa lix sano tan iyo markii Steve Jobs uu soo bandhigay noocii ugu horreeyay ee iPhone-ka ah ee kacaawiyay adduunka taleefannada gacanta.
Kudar qoraal iyo sawirro hodan kujiray Boosta
Boostada waxay na siineysaa awood aan ku dari karno qoraal qani ku ah emaylkeena, iyo sidoo kale inaan ku soo lifaaqno sawirro dusha.
Incipio iyo AMZER waxay muujinayaan soo-jeedintooda si ay uga dhigto iPhone-ka mid aan la burburin karin
Incipio Atlas waa kiis iPhone ah oo u oggolaanaya taleefanka in lagu qariyo biyaha oo AMZER waxay bixisaa ilaaliye shaashad aan la burburin karin.
Waxaan tijaabinay 'smartwatch' 'waan daawadaa'
Waxaan tijaabinay 'Watch Watch smartwatch'
iPhone5Mod waxay u soo bandhigeysaa kiis hufan iPhone 5
Dadka waawayn ee iPhone5Mod waxay bilaabayaan kiiskii ugu horreeyay ee hufan ee iPhone 5 kaas oo ku kacaya 40 doolar isla markaana lagu heli karo midabbo kala duwan.
Kiiska batteriga dibedda ee iPhone 5
Dib u eegis ku samee 2800mAh kiiska batteriga dibedda ee loogu talagalay iPhone 5. Soo ogow kiiskan weyn + batteriga oo ku habboon dhammaystirka Apple iPhone 5 cusub.
Fitbit Flex Wireless Activity + Sleep Wristband, jijin kale oo isboorti oo la xiriira iPhone
Fitbit Flex Wireless Activity waa jijin isboorti oo duubeysa waxqabadkaaga oo dhan, xitaa intaad huruddo oo aad ugu dirto iPhone mahadnaqa Bluetooth 4.0
Tabobar: bedel astaanta hawlwadeenka adiga oo aan JAILBILBILA
Casharbarka si loo beddelo astaanta hawlwadeenka oo aan JAILBILBILA.
Kiiska tirakoobka wuxuu ku darayaa dareemayaal taabasho dhabarka iyo dhinacyada iPhone-ka
Shirkadda Canopy ayaa soo bandhigtay kiiska tirakoobka ee iPhone-ka kaas oo ku siiya tabo taabasho dhabarka iyo dhinacyada ciyaaraha ama indhoolayaasha.
Cookoo, saacad kale oo leh isku xirnaanta Bluetooth 4.0 oo ku habboon iPhone
Cookoo waa saacad leh isku xirnaanta Bluetooth 4.0 oo ku xiran iPhone si loo soo bandhigo ogeysiisyo isla markaana leh badhan la beddeli karo.
Dhoofinta xiriiradaada GMail ee iCloud
Go'aanka Google ee ah inuu ka tagayo Isweydaarsiga si uu u midoobo xiriirada iyo kalandarka, iCloud ayaa noqon kara xulashada ugu xiisaha badan
Cashar: ku rakib WhatsApp ka iPhone 3G
Tabobar: ku rakib nooca ugu dambeeyay ee WhatsApp-ka iPhone 3G ah.
Guuldaradii weyneyd ee iPhone 5: kamaradeeda
G-Foomka wuxuu soo duubay fiidiyow cusub si loo tijaabiyo iska caabinta xad dhaafka ah ee kiiska iPhone 5
G-Form wuxuu duubaa fiidiyow xayeysiis ah si uu u muujiyo iska caabinta kiiskiisa Xtreme ee iPhone 5, kaas oo awood u leh inuu iska caabiyo saamaynta 30km sare.
Sida loogu wareejiyo farriimaha sanduuqyada kala duwan ee Boosta
Boostada waxay na siineysaa suurtagalnimada u wareejinta farriimaha aan helno sanduuqyada kala duwan ee isla koontada, xitaa xisaabaadka kale ee lagu qaabeeyey iPad-ka.
iPhone5Mod wuxuu bilaabayaa kumbuyuutar isku dhafan oo kaliya 2mm qaro weyn
iPhone5Mod waxay soosaaraysaa kiiboodhadhka ugu khafiifsanaa uguna khafiifsanaa ee waligood loo sameeyo iPhone, kaas oo dhumucdiisu tahay laba milimitir oo keliya
Calaamadeeyay: sanduuq aad u faa'iido badan oo emaylkeena ah.
Boostada waxay na siisaa suurtagalnimada dirista farriimaha qaarkood oo aan ka xusho sanduuqa boostada ee loo yaqaan "calaamadeysan" si aan ugu awoodno inaan si fudud ku garanno.
Mophie wuxuu iPhone u dhisayaa GoPro Hero-kiisa gaarka ah
iCloud iyo AppleID on iPad
Xisaabaadka ICloud iyo AppleID isku mid ma aha, qaabeynta saxda ah ee labadaba waxay faa iido weyn u leedahay isticmaalka iPad-kaaga.
Isku xir xiriirada iyo kalandarka Google
Google waxay iskaga tagi doontaa isdhaafsiga iyada oo loo marayo Isweydaarsiga sanadka 2013, laakiin mahaddeeda CalDAV iyo CardDAV waxaan awoodi doonnaa inaan iskuxirino xiriirada iyo jadwalka taariikhda.
Sida loo qasbo barnaamijyada dhow ee iOS 6
Qaboojinta barnaamijku waa ku yaryahay macruufka, laakiin way dhici kartaa. Qaabkan waxaad ku qasbi kartaa inaad xirto codsi kasta
Samee fariimo ku saabsan iPad-kaaga
Farriimaha, iMessage-kii hore, waa adeeg fariin deg deg ah oo u dhexeeya aaladaha Apple oo leh fursado badan haddii si sax ah loo qaabeeyo.
Wadaagista guriga: maktabadaada iTunes oo ku jirta iPad-kaaga
Ikhtiyaarka Wadaagista Guriga ee iTunes wuxuu ku siinayaa awood aad ugu raaxeysato dhammaan waxyaabaha iTunes-ka ka soo baxa iPad-kaaga inta aad isla shabakadda ku jirtid
Dhibaatooyinka WI-FI ee macruufka 6? Isku day xalalkan
Tutorial si loo xaliyo dhibaatooyinka isku xirnaanta WIFI ee isticmaalayaasha iPhone, iPad ama iPod Touch ay la kulmaan ka dib markii ay ku rakibayaan macruufka 6
BackBeat GO, samaacadaha dhagaha ee iPhone iyo iPad
U samee YouTube-ka liisaska liiska 'iPad'
Waxay muujineysaa sida loo abuuro liisaska liiska ama loogu daro fiidiyowyada kuwa jira barnaamijyada asalka u ah YouTube ee loogu talagalay iPad
Ku dhaqdhaqaaq xayiraadahaaga iPad-ka
Qalabka qoyska oo dhan adeegsadaan, waxaa muhiim ah in la xakameeyo waxyaabaha iyo barnaamijyada qaarkood si aan qof walba u helin marinkiisa.
Plex wuxuu ku ciyaaraa qaab kasta oo fiidiyow ah iPad-kaaga
Plex wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku ciyaarto iPad-kaaga wixii fiidiyoow ah ee ku kaydsan kombuyuutarkaaga gudaha shabakaddaada, xitaa banaanka, iyo tayo aad u fiican.
Bose waxay cusbooneysiineysaa SoundDock iyada oo lagu taageerayo hillaaca
Bose waxay soo saareysaa SoundDock III oo ku habboon iPhone 5 iyo jiilka shanaad iPod Touch iyadoo lagu darayo isku xiraha Apple Lightning. Qiimahiisu waa $ 249.
Kordhi cabirka qoraalkaaga iPad-ka
Kordhinta cabirka qoraalka ee codsiyada qaar sida Boostada ama Fariimaha ayaa waxtar weyn u leh dadka qaba dhibaatooyinka aragga
Si fudud loogu beddelo filimada aad Lugood leh gacan-jabis
Beddelashada filimada ee Lugood qaabab la jaan qaada waa mid aad u fudud mahadnaqa gacan-jabis, oo sidoo kale waa lacag la'aan.
Xarunta cusub ee Apple: gebi ahaanba hawo la'aan
Casharro lagu adeegsanayo iTunes 11 oo lala adeegsanayo iPad-kayga (Qeybta 4-aad)
Casharro ku saabsan sida loogu daro waxyaabo badan oo warbaahin ah iPad-keena leh iTunes 11
Casio wuxuu bilaabay saacad lammaaneeysa iPhone-ka
Casio waxay bilaabeysaa saacad awood u leh inay meel fog kula xirto iPhone-kaaga adoo adeegsanaya Bluetooth.
Weli dhibaato ayaa ka haysata helitaanka NanoSIM? Isticmaal kaar-gooyahaan
Qalab kuu oggolaanaya inaad u beddesho SIM ama kaarka SIM-ka yar nano SIM kaar ilbiriqsiyo, kan uu adeegsado Apple iPhone 5
AnoStyle waxay bixisaa fursad aad ku bedesho midabka iPhone 5-kaaga
AnoStyle waa adeeg cusub oo kuu oggolaanaya inaad qaabeeysid kiiska iPhone 5 ama iPad Mini oo leh midabbo mahadsanid habka anodizing.
Casharro lagu adeegsanayo iTunes 11 oo lala adeegsanayo iPad-kayga (Qeybta 1-aad)
Hagaha isticmaalka iTunes 11 qalabkaaga. Waxay kuu sharraxeysaa dhammaan howlaha iTunes si aad wax badan uga hesho iPad-kaaga.
Xadhig Gawaarida Gaaban ee iPhone 5 kaaga
Xarig hillaac ah oo kaliya 10 sentimitir ah si uu awood ugu yeesho inuu noqdo keey keyword oo uu ku kiciyo isla markaana u waafajiyo iPhone-gaaga meel kasta
Facebook wuxuu bilaabaa inuu awood u yeesho iskudhafka sawirka otomaatiga ah
Fikradda Smart Cover ee iPhone 5
Fikradda Smart Cover ee loogu talagalay iPhone 5 oo uu abuuray Adrien Olczak, oo ah qalab aan la dabooli karin si loo soo saaro maanta sababtoo ah maqnaanshaha magnets ee iPhone.
Xalka macquulka ah ee dhibaatooyinka Wi-Fi ee iPhone 5
iUFO, aaladda cusub ee aaladda aaladda ee lagu xakameeyo iPhone-ka
iUFO waa aalad cir ah oo laga hago taleefannada iPhone, iPad ama iPod Touch iyadoo la adeegsanayo IRDA iyo arjiga ay soo diyaariyeen dadka iHelicopters.
Sida loo xaliyo "keywords.plist data ee dhismahan" qalad markii xabsi laga dhigayo macruufka 6 iyo 6.0.1
Hadalka la qaadan karo ee loogu talagalay iPhone 5
PassHack: ka qari barnaamijyada 'PassBook' (ma jiro xabsi)
Ku qari barnaamijyadooda iPhone-ka aan jailbroken
IPhone 5-ka qaar waxay la yimaadaan batari dabacsan
i-Rinjiga, daboolaya si buuxda u astaysto iPhone-kaaga
iPaint wuxuu bixiyaa kiisaska iPhone ee caadada u ah oo ay weheliyaan vinyl hore iyo gidaar si aad uga dhigto mid asal ah.
IPhone 5 iyo kumbuyuutarku waxay muujinayaan dhibaatooyin
Tutorial: ku cusbooneysii iPhone 4 ama 3GS-gaaga iOS 6 adigoon salka u dhigin baseband-ka
Tutorial: sida dib loogu soo celiyo iPhone-kaaga laga soo bilaabo iOS 5.x ilaa iOS 5.x
Casharradan waxaad ku soo celin kartaa qalabkaaga A5 oo leh iOS 5.x adoo ku dhejinaya macruufka 5.x ee aad rabto intaad ...
Kiiska loogu talagalay iPhone 5 ee hagaajiya dhibaatooyinka sawirrada leh milicsiga guduudka ah
IPhone 5 Hillaac bir ah ayaa la jabsaday
Apple waxay si rasmi ah ugu dhawaaqdaa dhibaatada kamaradaha iPhone 5
U beddelo iPhone 5-ka NanoSIM SIM ama MicroSIM
U badal SIM-gaaga ama MicroSIM-gaaga NanoSIM oo loogu talagalay iPhone 5
Tutorial: tallaabooyinka la raaco ka dib markii la furayay iPhone ah by IMEI
Tutorial: sida loo furo iPhone by IMEI weligiis, JAILBREAK
Duo Gamer, joystick oo leh taageerada Gameloft iyo Apple
Duo Gamer waa joystick-ka la soo saaray iyada oo lala kaashanayo Gameloft ee qalabka macruufka ee leh hannaanka oggolaanshaha Apple
Tutorial: Hoos u dhig ka macruufka 6 ilaa macruufka 5.1.1
Dhibaatooyinka WiFi ee iOS 6.0
Fiilooyinka iftiinka ugu horreeya ee raqiis ah ayaa muuqda laakiin kaliya waa lacag
Iibso fiilo dheeri ah oo lagu dalaco iPhone 5 ama iPod Touch 5G qiimo ka jaban kan rasmiga ah ee Apple
Daraasiin ka mid ah dadka isticmaala iPhone 5 ayaa ka cabanaya dhibaato kamarad
Kiis Transparent TPU oo hadda loo heli karo iPhone 5 kaliya € 7 (Amazon)
Kiiskeyga aan ugu jeclahay hadda waxaa loo heli karaa iPhone 5 kaliya € 7 (Amazon)
Scubo: 3D daawade ee iPhone 4 iyo 4S
Sida loo sameeyo iMessages-ka iPhone iyo Mac si aad ugu isticmaasho lambarkaaga taleefan ahaan soo diraha
Ku samee iMessages iPhone iyo Mac si aad ugu isticmaasho lambarka taleefankaaga soo diraha
Tutorial: sida loo rakibo Cydia iOS 6
Codbixinta Toddobaadka: iPhone 5 madow ama caddaan?
Apple casaanka Bumper ayaa sidoo kale ku jira nooc jaban (€ 2)
Sida loo hubiyo haddii UDID-gaaga iPhone-ka uu siidaayay
CamTime: ku dar saacad si kamarad iPhone ah (Cydia)
Tabobar: wax ka beddelo jilitaanka macruufka si uu ula shaqeeyo xallinta 640 × 1136
Tutorial si wax looga beddelo jilitaanka macruufka ee lagu soo daray Xcode si loola shaqeeyo xallinta 640x1136 ee iPhone 5-ta cusub ay lahaan karto
Xarig gaaban oo loogu talagalay iPhone, iska ilow jahawareerka
Gacan-la'aan oo leh nashqadeynta iPhone ee for 15
Midabada ilaaliyayaasha loogu talagalay iPhone 4 / 4S
Xulashada ilaaliyeyaasha midabada leh si loo siiyo taabasho midab ah iPhone 4 / 4S iyo fiilooyinka leh fiilada USB ee midabada kala duwan sidoo kale.
Bladepad, farxad kale oo loogu talagalay iPhone raadinta maalgelinta Kickstarter
Ilaa patent-ka Apple ee kontoroolka fog ee aaladaha iOS-ka uu noqdo mid dhab ah, waxaan heysanaa ikhtiyaar ...
Mophie Outride, oo u beddelaya iPhone 4 / 4S GoPro
Mophie Outride wuxuu u rogaa iPhone-ka GoPro iyada oo ay ugu mahadcelineyso nidaamkiisa isku-xirnaanta iyo xagasha 170 darajo si uu u qabto daqiiqadaha ugu fiican
Isbarbardhiga hore ee iPhone 4S vs iPhone 5
Isbarbar dhigga nashqadda hore ee iPhone 4S marka loo eego ta iPhone 5 oo ku biiri doonta shaashad afar-inji ah oo muujinaysa isbeddellada bilicsanaanta
Maqaarka ayaa ku daboolan midabada Cuccibelle
Xaalad cusub oo khaldan ayaa laga helay App Store oo cudurka PC-ga ku dhacay
Kiis cusub oo ah furin ayaa laga helay App Store kaas oo ku dhacay PC-yada iyada oo loo marayo Worm.VB-900 dixiriga ah ee wax ka beddelaya diiwaanka Windows.
Dhegaha Dhegaha ee makarafoonka loogu talagalay iPhone for 8
Dhegaha Dhegaha ee makarafoonka loogu talagalay iPhone for 11
Kiisaska lagu ciyaaro iphone-kaaga
Qalabka lagu xiro iPhone-gaaga oo leh Bumper si ay u xirmaan ama xarig kasta
Mobile-ka iCade ee loogu talagalay iPhone-ka hadda waa la iibinayaa
ION waxay horey u iibisay nooca la qaadi karo ee iCade, oo inta badan loogu talagalay dadka isticmaala iPhone ee doonaya inay bixiyaan xakameynta ciyaarta jirka.
U samee tikidhada imtixaanka ee Passbook si bilaash ah
U samee tikidhada imtixaanka ee Passbook
TAKTIK, kiis naqshadeeye loogu talagalay iPhone-ka oo ay abuureen horumariyeyaasha LunaTik
Laga soo bilaabo abuurayaasha Lunatik, ayaa ka soo baxaya kiis iPhone ah oo leh naqshad qurux badan oo ka ilaalin doonta terminaalka dhammaan noocyada xaaladaha ba'an.
Kiisaska ka difaaca iPhone-ka biyaha iyo ciidda inta lagu jiro xagaaga
Xulashada kiisaska aad ku quusin karto iPhone-ka biyaha, ka ilaali ciidda iyo walxaha kale: Aquapac, Proporta iyo Gomadic
Hoos uga soo deg baseband 06.15.00 ilaa 05.13.04
Ku guuleystaha Kiiska Beddelka Midabka ee iPhone 4 / 4S
Ku guuleystaha midabka beddelka kiiska ee loogu talagalay iPhone 4 / 4S ee aan ku dhejineyno iskaashi lala yeesho dukaanka qalabka AlertiPhone.com
Tutorial: sida loo rakibo iOS 6
Sida loogu lifaaqo faylasha emaylka leh iOS 6.0
Sida loogu lifaaqo feylasha iimaylka iOS 6.0
Xeedho qorraxda loogu talagalay iPhone
Casharbarka: iOS 5.1.1 JAILBREAK aan la xirin iyadoo la adeegsanayo Redsn0w (Cydia)
Bomper: noocyo kala duwan oo daboolka ugu fiican